Z ကို Trader FX EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာZ ကို Trader FX ကို EAZ ကို Trader FX EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် Z ကို Trader FX ကို EA 2
စျေးနှုန်း: $ 117 (၁ ခုနှင့် ၁ ခု၊ အခမဲ့မွမ်းမံမှုများနှင့်ပံ့ပိုးမှု ၁ ခု)
- အခြေခံ:2Real &2Demo Accounts – Lifetime License – Free Updates & Support – Regular Price: $117
- အဆင့်မြင့်3Real &3Demo Accounts – Lifetime License – Free Updates & Support – Regular Price: $137
Z Trader FX EA ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Metatrader4အတွက်အကျိုးရှိသော Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး
Z ကို Trader FX ကို EA တစ်ဦးဆန်းသစ်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါသည် Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး အောင်မြင်စွာကျော်နှင့်နောက်တဖန်ကျော်န့်အသတ်အမြတ်အစွန်းထုတ်လုပ်, အကြိမ်အရေးယူရာပေါင်းများစွာနှင့်ရာပေါင်းများစွာထဲသို့သွင်းထားထားပြီးဖြစ်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များ, အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး။
အဆိုပါ Forex စက်ရုပ် အများအပြားစျေးကွက်ခေါင်းဆောင်တီထွင်မှုပါရှိသည်။ အဆိုပါဖန်တီးသူသည်ဤထူးခြားသောပိုက်ဆံထုတ်လုပ်သူကုန်သွယ် algorithm ကိုဖန်တီးနိုင်စေဖို့နှစ်ပေါင်းကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေခဲ့ကြသည်။
ဤသည်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ် EURUSD 15 မိနစ်အချိန်ဘောင်အပေါ်ငွေကြေးတစ်စုံ။ အဆိုပါ Forex EA ၏မရှိ martingale သတ်မှတ်ထားတဲ့အများကြီးအရွယ်အစားကိုအသုံးပြုသည်နှင့်မဆို FX ပွဲစားတွေနဲ့သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။
လုံးဝတူညီရလဒ်များကိုရရှိရန်သငျသညျအတူတူပွဲစားအပေါ်ကုန်သွယ်မှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နှင့်အတူနှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ် Forex4you broker. For all this time they didn't let us down notasingle time.
သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကို EA အတွက်အကောင်းဆုံး setting များကိုအသင့်တပ်ဆင်ပြီးသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်အားဖြင့်သူတို့ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အရေးအပါဆုံး, သင်အပြည့်အဝထောက်ခံမှုရရှိရန်နှင့်အဖွဲ့သည်အစဉ်အမြဲသင့်ကိုကူညီပေးဖို့အဆင်သင့်ပါ!
Z ကို Trader FX ကို EA သင်အောင်မြင်မြင်ချင်သူကိုကုန်သည်တွေအနေနဲ့ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့သည်!
Z Trader FX EA - Forex Trading နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သည်မဟုတ်လော
၏အသုံးပြုမှုကို Make Z ကို Trader FX ကို EA နှင့်ရွှေသို့သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဖွင့်!
Z ကို Trader FX ကို EA - Forex Trading စက်ရုပ်အကြောင်းမကြားရဘူးလား။
မည်သည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲလွယ်ကူသောပိုက်ဆံဘာသည် Z ကို Trader FX ကို EA အားလုံးအကြောင်းပါ။ ဘောင်, အကြေးခွံနှင့်သင့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာကန့်သတ်သငျသညျပေးခဲ့ကြပြီးနောက်, စက်ရုပ်ကျော်ကြာနှင့်သင်တို့အဘို့အရောင်းအပေါငျးတို့သကိုင်တွယ်။ ဤသည်အဖြစ်ကောင်းစွာအခြားအရေးကြီးကိစ္စရပ်များပေါ်တွင်သင်၏စွမ်းအင်အာရုံစိုက်နေချိန်တွင်ထိန်းချုပ်မှုယူရန်သင့်အားခွင့်ပြုထားသည်။
အဆိုပါ EA ၏အပေါ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနှင့်အမြတ်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်သည့်အခါလုပ်ငန်းလည်ပတ် 24 /5ညဥ့်အစည်းအဝေးများနှင့်သပိတ်ကာလအတွင်းအမြတ်အစွန်းလဲလှယ်ခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေ။ သင်ကကို turn off မဟုတ်လျှင်ဒီတော့သင်ကအကျိုးအမြတ်ကုန်သွယ်မှု option ကိုလက်လွတ်မည်မဟုတ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုလူသားမြားသမတူဘဲ, အ FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးစိတ်ခံစားမှုမတည်ငြိမ်မှုများကငျးမဲ့သည်နှင့်သာလုံးဝ Calculator ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးစွယ်-of-the-ယခုအချိန်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချကြလိမ့်မည် တကယ်တော့ကအချက်အလက်များနဲ့ကိန်းဂဏန်းများ compile ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိတော့မည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလမျး၌အရမသွားပါစေလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
Z Trader FX EA - ကုန်သွယ်ရေးယုတ္တိဗေဒ၊ တည်ဆောက်ပုံနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များအကြောင်း
Z ကို Trader FX ကို EA အချို့သောနာရီအတွင်းအရောင်းအ, လာမယ့်စုံတွဲနာရီသို့မဟုတ်နေ့ရက်ကာလအဘို့စျေးနှုန်းညှနျကွားခပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အန္တရာယ်များနှင့်နှစ်လိုဖွယ်အမြတ်အစွန်းနှင့်အတူကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ အဆိုပါကုန်သွယ်မှုစနစ်ကြီးမြတ်အမြတ်အစွန်းရရှိမညျနှင့်နေ့တိုင်းအရောင်းအဖွင့်လှစ်။
ဤ FX စက်ရုပ် အပေါ်အရောင်းအ EURUSD ငွေကြေးတစ်စုံ။ terminal ကိုအတွက်အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေလိုအပ်ချက် $ 100 / 0.01 အများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးအဖြစ်တာရှည်အကျိုးဆောင်တဲ့ Expert အကြံပေးကုန်သွယ်ခွင့်ပြုထားအဖြစ်မဆို FX အရစ်ကျနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအများအားဖြင့်အသုံးပြုတချို့ကပွဲစားများမှာ Forex4you, FXChoice, IC စျေးကွက်များ, Pepperstone သို့မဟုတ် RoboForex.
ဒီထူးခြားတဲ့ကုန်သွယ် software ကိုအာမခံမယ့်များ၏ဖန်တီးရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကို EA နှင့်အတူပျက်ကွက်အလွန်ဖှယျအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ် 94% အောင်မြင်မှုနှုန်းထက်ကိုပိုပြီး နှင့်လည်းအတည်ပြုထားသောရလာဒ်များပေးလိမ့်မည်။
ပေါ်လစီပြန်အမ်း: 30 ရက်ပေါင်းပိုက်ဆံ၏ရောင်းချသူထံမှပြန်အာမခံချက် Z ကို Trader FX ကို EA.
Z ကို Trader FX ကို EA မယုံနိုင်စရာစျေးနှုန်း, ဆိုလိုသည်မှာသာ $ 117 မှာချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ္တူဖမ်းပြီးမှမစောင့်ကြဘူး!
အဆိုပါတရားဝင် Z ကို Trader FX EA ၏ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
ရက်စွဲကို Start: သြဂုတ်လ 27, 2018
နေ့စွဲ Start: ဖေဖေါ်ဝါရီလ 19, 2019
Demo ပွဲစား: Forex4you
Z ကို Trader
Z ကို Trader FX
Z ကိုကုန်သည်များ FX EA ၏ - METATRADER4performance UPDATE အကျိုးအမြတ်ရ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး: + 38.9% MONTHLY Return (အစစ်အမှန် TRADING ACCOUNT ကို!) ချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်, သတင်း! Z ကို Trader FX EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Metatrader4(MT4) သည်အမြတ် Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးကဒီမှာပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆုကြေးငွေရယူပါ: https://www.bestforexeas.com/z-trader-fx-ea-review/ Z ကို Trader FX ကို EA အနေနဲ့ဆန်းသစ်ဖြစ်ပါသည် အောင်မြင်စွာကျော်နှင့်နောက်တဖန်ကျော်န့်အသတ်အမြတ်အစွန်းထုတ်လုပ်, အကြိမ်အရေးယူရာပေါင်းများစွာနှင့်ရာပေါင်းများစွာထဲသို့သွင်းထားထားပြီးဖြစ်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များ, အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး။ အဆိုပါ Forex စက်ရုပ်အများအပြားစျေးကွက်ခေါင်းဆောင်တီထွင်မှုပါရှိသည်။ အဆိုပါဖန်တီးသူသည်ဤထူးခြားသောပိုက်ဆံထုတ်လုပ်သူဖန်တီးနိုင်စေဖို့နှစ်ပေါင်းကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြပြီ... ဆက္ဖတ္ရန္
ငါသည်ဤထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ပြီးသရုပ်ပြအကောင့်ထဲသို့ထည့်ပြီးပါပြီ။ တစ်လကြာပြီးနောက်တွင်၎င်းသည် SWAP ကော်မရှင်များကိုနေ့စဉ်ထပ်မံတိုးချဲ့နေသည့်ပွင့်လင်းသောရာထူးများစွာကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကြီးထွားလာသည်။ ခြောက်ပတ်ကြာပြီးနောက်ထိုရာထူးနေရာစုစုပေါင်းမှာ EUR -3'674 ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ demo account MT-4 အကောင့်နံပါတ် 31010216 - Investor Password: ZT2020 ကိုကြည့်ပါ။ ယခုမှစုစုပေါင်းပြန်အမ်းငွေမှာယူရို ၁ ဒသမ ၁၇၇ ဒသမ ၂၄ ဖြစ်သည် - ရက်ပေါင်းများစွာကတည်းကမပြောင်းလဲပါ။ ဤငွေပမာဏ၏ယူရို ၂၀၀ သည်ကုန်သွယ်မှုအပေါ်တွင်သာမူတည်သည်။ အကြောင်းမှာ EA သည် ၀.၄ အစား ၀.၄ အစားပထမဆုံးကုန်သွယ်မှုကိုရည်ရွယ်သည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။... ဆက္ဖတ္ရန္